गर्भवती महिलाहरुले खान नहुने कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्भवती महिलाहरुले खान नहुने कुराहरु !!
गर्भवतीको समयमा आफ्नो स्थास्थ्य र डाइटबारे महिलाले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरूरी हुन्छ । आफ्नो एक गल्ती नै गर्भमा रहेको बच्चाको लागि खतरनाक हुन सक्छ । गर्भवती महिलाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ गर्भवती महिलाले खान नहुने केही खानेकुराहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
काचो अण्डा– जिम जाने मानिसहरुले केही समय काच्चो अण्डा खाने गरेको देखिन्छ । गर्भवती महिलाले भने काचो अण्डा सेवन गर्नु खतरनाक हुन सक्छ । अण्डामा सालमोनेला ब्याक्टेरियम हुन्छ, जसका कारण फूड पोइजन हुन सक्छ । गर्भवती भएको समयमा महिलाको प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुन्छ, जसका कारण यस ब्याक्टेरियाले गर्दा फूड पोइजनको शिकार हुने खतरा हुन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
बैतडीको मेलौलीमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका लक्ष्मण चन्दको मृत्यु !!